Posted by YeKyawAungMDY at 9:57 AM
၆၂ နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ 
Posted by YeKyawAungMDY at 11:55 PM
7 July -- ၇ ရက်၊ ၇ လ၊ ၁၉၆၂ မမေ့နဲ့ 
Posted by YeKyawAungMDY at 12:53 PM
HAPPY BIRTHDAY TO DASSK
WISH YOU BE FREE FROM PRISON FOR BURMA!!
FREE BURMA WITH YOU FROM COWARD SPDC!!
Posted by YeKyawAungMDY at 9:44 PM
အခုလည်း ငတ်လို့ ဗုံးထခွဲတဲ့ မြောက်ကိုရီးယားအရေးက ထပ်ပေါ်လာတယ်...
ကိုပေါ်ဦး နှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အားလုံး၊ အန်တီနှင့်တကွ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေ...
Posted by YeKyawAungMDY at 1:50 PM
မောင်ဝံသ (Forwarded by FAC yahoo group)
ပါလီမန် အမတ် (MP-Members of Parliament) ဆိုတာ မဲဆန္ဒနယ် အသီးသီးက မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူတွေကိ ရွေးကောက် တင်မြှောက်လိုက်သူ ဖြစ်တယ်။ အမတ်အများစုဟာ နိုင်ငံရေးပါတီများကို ကိုယ်စားပြုတယ်။ အမတ် အနည်းစုကတော့ တစ်သီး ပုဂ္ဂလ ၀င်အရွေးခံခဲ့ကြပါတယ်။
Posted by ပိတောက်မြေ at 12:38:00 AM
Posted by YeKyawAungMDY at 6:41 PM
Posted by YeKyawAungMDY at 9:36 PM
and the silencing of dissent, know that you are on the wrong
[Source: ABFSU (FAC)group mail]
Posted by YeKyawAungMDY at 9:58 AM
[Source: Ko Nyi Nyi - ABFSU(FAC)]
Posted by YeKyawAungMDY at 2:24 PM